Posted by sosegado at 4/24/2010 04:44:00 PM
ဘဲကင်ဆိုရင် ပီကင်းမှရယ်မဟုတ်ဘူး။ ဒိုက်ဦးကလာတဲ့ဘဲလည်း ၀ါးတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပီင်္ကင်းအစစ်ကိုတော့ တွယ်ဖူးချင်တယ်။
အစားဆိုရင် တော့ ထိပ်ဆုံးကရောက်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူး.. တကယ်တော့ အရမ်းအရမ်းကို ဘဲကင် ကိုကြိုက်တာပါ...
အခုတော့ ရွှေဘဲ က ဘဲကင်ကိုဘဲစားနေရတယ်.. ကိုဆိုဆီ စားသလို ပီကင်း ဘဲကင် ကို ကော့ပြန့်လေး နဲ့ လိပ်စားချင်လိုက်တာဗျာ.. အချဉ်ကလည်း ရွှေဘဲ က ပဲငါးပိချဉ်မဟုတ်ဘူး ဆော့ နဲ့ စပ်ထားတာ ထင်တယ် သိတ်မကောင်းဘူး..
ဘဲကင် ကတော့ ကောင်းပါတယ်..
့ကိုတည်ငြိမ်ရေ...စလုံးမှာလည်း အဲဒါမျိုး ရှိတယ်ဗျ၊ အဲလိုလေး လိပ်ပြီးစားရတာမျိုး ဒါပေမဲ့ ဘေဂျင်းက ဘဲကင်အစစ် ကိုတော့ မီမယ်မထင်ဘူးဗျာ...စားချင်စရာကြီးနော်...ဟီး...:)
ဘဲကင်ကိုမဋ္ဌကိုက်ပေမဲ့ နှင်းဆီလ္ဘက်ရည် ကိုတော့သောက်
အဲ.. စားတဲ့ဘဲကိုပြောတာနော်း)
အပြင်သွားတဲ့ ကောင်မလေးကို ဖုန်းနဲ့လှမ်းမှာလိုက်ပြီ
ကိုဆိုဆီရဲ့ ဘဲကင်..း)
ဘဲကင်လာစားတယ်.. ဓါတ်ပုံထဲက ပုံတွေနဲ့ ဗိုက်တော်တော်ဆာသွားပြီ..။
မြန်မာပြည်က ပိုစားကောင်းတာလား ရှားရှားပါးပါး စားရလို့လားတော့ မသိပါဘူး။
ဒီမှာလဲ နံမည်ကြီး တန်းစီးနေရတဲ့ ဆိုင်တွေတော့ ရှိတယ်.ဒါပေမယ့်.ပီကင်းဘဲကင် စားဖူးချင်သေးတယ်..။
ရှလွတ် ပလပ် ဂလု
အရင်က ဘဲကင်ကြိုက်တယ်။ ခုဘဲကင်စားရင် အဆီတွေများမှာစိုးလို့ အရေခွံ ဖယ်ဖယ် စားမိနေတော့ မတန်ဘူးဖြစ်နေလို့ သိပ်တောင်မစားဖြစ်တော့ဘူး။
အမလေး... ညတရေးနိုး လာဖတ်မိတာ မှားပါတယ်။
လေ့လာသွားပါတယ်ကိုဆိုဆီ....ကျနော်က ဘဲကင်မကြိုက်ဘူးရယ်...ဘဲကင်မှ မဟုတ်ဘူး...အသားဆို ကြက်သားကလွဲလို့ ကျန်တာ ဘာမှ မစားလို့ပါ...
After you hadataste of that Beijing duck, you will not fineagood Beijing duck any where else in the world.
That was the best Beijing duck I ever tasted. I’ll visit again Beijing just for that duck.
You can get the same Beijing style duck in some high end restaurant in Singapore. I don’t remember the name of restaurant. There is one in Shangri-La hotel.
ဟီးဟီး ဘဲကင်ကြီးသရေကျစရာနော်။ ပီကင်းဘဲကင်ကောင်းလားဟင် ! အဖေပြောဖူးတာတော့ ပီကင်းဘဲကင်က အရသာပေါ့တယ်ဆိုလားပဲ။
ဒီမှာလည်း westen park က ဘဲကင် အဲသလိုပဲ အဖတ်နဲ့လိပ်စားရတယ်လေ။ အရိုးတွေကိုတော့ အကြွပ်ကြော်ပေးတယ်။ ဘဲကင်ဆိုင်တွေတော့ တော် တော်လေးများလာပါတယ်။ အရင်ကဆို ရွှေငါးတို့ ရွှေဘဲတို့ လောက်ပဲရှိတယ်။း))) တော်ပီ ပြောရင်း စားချင်လာပီ။
ကျေးဇူးဗျာ။ ဗဟုသုတရသလို ဗိုက်လဲဆာလာပါတယ်။ ဘဲကင်မရှိတဲ့ ဒေသရောက်နေတာတောင် ရင်နာမိပါရဲ့...
ဘဲကင် နည်းနည်းမြည်းသွားပါတယ်။ ဒီကလည်း ပီကင်း အစစ်ကိုမြည်းချင်နေတာဗျ :)
လူအများကြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မစားဘူးပါဘူး၊ ပီကင်းဘဲကင်က နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ပီကင်းဘဲကင် လာစားသွားတယ်၊ ဇာတ်လမ်းတွေရေးပါဦး၊ moe
ပူးတေက မွေးနေ့ကျွေးလို့စားလိုက် ဆရာမရွှေစင်ဦး မင်္ဂလာဆောင်သွားစားလိုက် ဟိုကကျွေးဒီကကျွေးနဲ့
ဗိုက်တောင်တော်တော်ဖောင်းလာပေါ့.ဟော ခုလည်း ကိုဆိုဆီကကျွေးပြန်ပီ..ကျွန်တော်တို့မှာ ရွှေစင်ဦးလို လည်း ရွှေဘဲသွားမစားနိုင်တော့ ကိုဆိုဆီကျွေးတာပဲ အ၀တုတ်လိုက်တော့မယ်နော်..ပြီးရင် ကိုသက်တန့်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းကိုအုန်းရေ သွားသောက် လိုက်ဦးမယ်..အား ဗိုက်ကိုတင်းသွား တာပဲ..အဟဲ
ဘဲကင်စားပြီးပြီ၊ လုပ်ပါဦး ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ စောင့်နေမယ်၊ Zaw
ဘဲကင်ဆို မြသွေးက အရေခွံမှကြိုက်တာ။
ချပါတီလို ဂျုံပြားလေးနဲ့ ထုတ်စားရတာ ကြိုက်တယ်။
ဒီမှာတော့ Western Park မှာ အဲ့ဒီပုံစံမျိုး စားလို့ရတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အောက်ဆုံးက နှင်းဆီလဖက်ရည်လေးကို ပိုသောက်ချင်တာ.....။
အခုစာဖတ်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်သောက်နေတဲ့ရေနွေးကြမ်းက ကောက်ညင်းနံလေးမွှေးတဲ့ လဖက်ခြောက်လေးလေ.....။
ပြောချင်တာ.......ကြာပါပြီ....။ မအားလို့ ခုမှပဲရောက်တာကြည့်....။
နိုင်ငံတကာ ရောက်မြန်မာ အငတ် တွေ ကို သပ်သပ် သွားရေ ကျအောင် လုပ်နေသလို ပဲ အဟီး...လွန်တာရှိက တွေ့ပုချိ..
Increasing your quest engine ranking for the website does
not have to be an impossible task available simply to computer
experts. And then after you've done that, the internet search engine will give you pages containing numerous sites which contains the keyword you enter. The result - your blog might appear in some random long tail searches, and often will never rank for the keywords you happen to be targeting.
Review my website; http://proimblogger.com/article-builder-review/
Vеry descriptіve аrtiсle, Ι lіκed thatalot.
Mу web-site :: Bauchmuskeltraining
Whοа! This blog looκs just lіκe mу
οld onе! It's onacompletely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!
I believe ωhаt you ρosted mаdеaton of
ѕense. But, consider this, what іf you ωеге to write а killer heaԁlіne?
I mеаn, I ԁon't want to tell you how to run your blog, however suppose you addedatitle to maybe grabaperson'ѕ attention?
I meаn "ပီကင်းဘဲကင်" isalіttlе plаіn.
You оught to glanсe at Yаhoo's home page and see how they write article titles to grab people to click. You might addarelated video orapic or two to get readers interested about what you've got tο sаy.
ӏn mу oρinіon, it could make yоur
postsalittle lіѵеlіer.
Fееl free to surf tо my webpagе .
Hі wоuld you mind letting me knoω which ωebhost you're using? I've
loаԁed your blog in3different brоwsers and I must say this blog
loads а lot quicκer then most. Ϲan уou recommendagood wеb hosting provider
аt а honest priсe? Many thanks, I appreciаte it!
Fеel freе to surf to my weblog :: häMorrhoiden
Article wгiting is alsoafun, if уou be famіlіar with
thеn you cаn writе if not it is cοmplіcatеd to write.
my blog pοst - Sixpack
Useful infoгmаtion. Fοrtunate
me I discovered your websitе by chance, and Ι аm stunned why this аccidеnt didn't happened earlier! I bookmarked it.
Here is my web blog: H�Morrhoiden
Also visit my weblog: Bench Craft Company
Also visit my site - appliance repair tampa - -
clever work and exposure! Keep up the good works guys I've incorporated you guys to my personal